Isigama sochwethezo: I-Apex yeSwash kunye neGadzook Phakathi | Martech Zone
Isigama sochwethezo: I-Apex ye-Swash kunye ne-Gadzook Phakathi
NgoLwesithathu, Oktobha 21, 2015 NgeCawa, Oktobha 25, 2015 Douglas Karr
Ukuchwetheza kuyamangalisa kum. Iitalente zabaqulunqi bokukhulisa iifonti ezingafaniyo nezinye kwaye ezinokubonisa imvakalelo ayisiyonto imfutshane ngokungakholelekiyo. Kodwa yintoni eyenza ileta? UDiane Kelly Nuguid beka ndawonye i-infographic yokuqala ukubonelela ngengqondo kumacandelo ahlukeneyo oonobumba kwitypography. Cofa kuyo ukuze ubone umbono opheleleyo.
Isigama Isigama Iglosari
ukuvuleka - Indawo evulekileyo okanye ebiyelweyo engavulekanga eyenziwe yikhawuntara evulekileyo.
Ipepe Indawo yokudibanisa ephezulu yoonobumba apho kudibana imivumbo emibini; inokujikeleza, ibukhali / ibhekise ngqo, iflethi / buthuntu, njl
IArc yesiqu - Ukubetha okungagungqiyo okuqhubekayo nesiqu.
Nyuka - Inxalenye yefonti enyukela ngaphaya kobude beempawu.
Ukholo - Ukubetha okuthe tyaba okungadibani nesiqu kwesinye okanye kwiziphelo zombini.
ibhari Ukubetha okuthe tyaba ngoonobumba A, H, R, e, kunye no-f.
Isiseko Ukulungelelaniswa ngokuthe tye kwesiseko soonobumba.
isitya - Ukubetha okungagobanga okwenza ikhawuntara.
counter -Isithuba esivalwe ngokungaphelelanga okanye esipheleleyo ngaphakathi komlinganiswa.
Ukubetha ngomnqamlezo Umgca oqhubeka unqumla / uye kwisiqu sonobumba.
Ukuhla Inxalenye yomlinganiswa othi ngamanye amaxesha wehle ngezantsi kwesiseko, ngesiqhelo kwi-ag, j, p, q, y ngamanye amaxesha j.
Indlebe -Ukubetha okuncinci okuphuma ukusuka phezulu koonobumba abancinci g.
Ngeenyawo - Inxalenye yesiqu eshiyeke kwisiseko.
UGadzook -Umhombiso odibanisa oonobumba ababini kwiLigature.
Joint -Ingongoma apho ukubetha kuqhagamshela kwisiqu.
Ukuqonda Umgama phakathi koonobumba kwigama.
Ukukhokela Umgama phakathi kwesiseko somgca wokubhaliweyo omnye uye kwelandelayo.
Umlenze -Ukubetha okufutshane, ukwehla kwifom yeleta.
Ubungakanani -Iileta ezimbini okanye ezingaphezulu ezixhumeneyo ukwenza umlinganiswa omnye; ikakhulu zokuhombisa.
Ubude bomgca - Bangaphi oonobumba abalingana emgceni ngaphambi kokuba ubuyele ekuqaleni.
loop Inxalenye esezantsi yoonobumba abancinci g.
Serif -Uqikelelo olwandisa imivumbo ephambili yomlinganiswa. Isans serif ngokoqobo ithetha ukuba 'ngaphandle' kukaSerif. Iifonti ezisekwe kwi-Serif zaziwa ngokunceda abantu bafunde ngokukhawuleza kuba ubume begama buchazwe ngcono.
Ngamahlombe - Ukubetha okungagungqiyo h, m kunye n.
Swash - Ukongezwa kokuhombisa okanye ukubetha kwifom yeleta.
stem Ukubetha ngokuthe ngqo ngokuthe nkqo kwileta (okanye idiagonal xa kungekho nkqo).
Stroke - Umgca othe tye okanye ogobileyo owenza imivalo, iingalo, iziqu kunye nezitya.
Indawo yokukhwelela - Ukuphela kwako nakuphi na ukubetha okungabandakanyi iserif; ibandakanya iiterminal zebhola (Isetyhula ngokumila) kunye neefayini (ezigobileyo okanye ezimile okweqanda).
Vertex - Inqaku elisezantsi lomlinganiswa apho kudibana khona imivumbo emibini.
x-ukuphakama -Ukuphakama komlinganiswa oqhelekileyo (ngaphandle kwayo nayiphi na into enyukayo okanye eyehlayo)
UJanie Kliever ubonelele owesibini infographic yeCanva ngeenkcukacha ezongezelelweyo. Cofa kuyo ukuze undwendwele inqaku labo ngenjongo yokujonga ubunzulu nganye.
tags: ukuthambisaincancaIarc yesiquingaloukunyukaIsiphelo sebholabarsisekoisityaidovacounterukubethawehlaUDiane Kelly Nuguidindlebeifomiinxalenye zomgcaiifontiunyawogadzookUJanie Klieveredibeneyoukucacisakhokelaumlenzeubude bomgcaloopiinxalenye zomgcaiisans serifserifemagxenistemukubethaswashkwisigxinaisigamatypographyIglosari yokuchwethezaisigama sokuchwethezaSigamax-ukuphakama
ILizwe Lesithembiso: Ukuthengisa okuNenzuzo kunye noZinzileyo kwi-ROI nje ngaphambili
Iindlela ezi-4 zokuCutha uMngcipheko woRhwaphilizo oluRhabaxa